Ayaa go'aaminaya magaca duufaannada? | Saadaasha Shabakadda
ka harikeyn Waa astaamaha saadaasha hawada, oo loo arko dayax gacmeedka, loona arko inay yihiin nidaamyo si habeysan loo abaabulay, oo xitaa leh qurux keli ah. Si kastaba ha noqotee, waxay badanaa u geystaan ​​waxyeelo weyn oo maadi ah waxayna qaadi karaan nolosha boqolaal qof, sida Hurricane Matthew ay ku sameysay Haiti.
Laakiin yaa go'aamiya magaca duufaannada? IYO, Maxay magac ugu leeyihiin?
Liiska magacyada duufaannada kulaylaha ee ka sameysmaya Badweynta Atlantik waxaa la abuuray 1953 Xarunta Qaranka Duufaanta Qaranka ee Mareykanka (NHC). Xilligan, liiskan waxaa loo adeegsadaa halbeeg loogu talagalay liiska gobollada kale ee adduunka, waxaana cusbooneysiiyay Ururka Saadaasha Hawada Adduunka (WMO), oo ah hay'ad ka socota Qaramada Midoobay oo fadhigeedu yahay Geneva (Switzerland).
Magacyada duufaannada waxaa loo kala qaadaa sida xarfaha isugu xiga, marka laga reebo xarfaha Q, U, X, Y, iyo Z, iyo magacyada lab iyo dhaddig oo is beddelaya. Magacyadu way ka duwan yihiin gobol kasta, sidaa darteed digniinta si fiican ayaa loo bixin karaa mana jiro wax wareer ah.
In kastoo ay u muuqan karto mid kale, magacyada waxaa loo adeegsadaa, kuma koobna oo keliya Ingiriisiga, laakiin sidoo kale Isbaanish iyo Faransiis. Dheeraad ah, dib loo warshadeeyo lixdii sanoba mar, laakiin waxaa jira qaar joojiya adeegsiga haddii duufaanta laga hadlayo ay waxyeello geysatay, sida ku dhacday Katrina, oo ay ku dhinteen 2000 oo qof New Orleans (USA) 2005, tusaale ahaan.
Xiisad ahaan, waa in sidaas la dhaho khubarada saadaasha hawada ayaa inta badan isticmaalay magacyo dumar intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka: magacyada hooyooyinkood, xaasaskooda ama kuwa jecel, ayaa sharaxay Koji Kuroiwa, oo ah madaxa barnaamijka WMO tropical cyclone. Laga bilaabo 1970-yadii, magacyada ragga ayaa sidoo kale lagu daray si looga fogaado isu dheelitir la'aanta jinsiga.
Si kastaba ha noqotee, duufaannada dumarka waxay dilaan dad ka badan kuwa leh magacyada ragga, sida laga soo xigtay a waxbarashada oo ka socda Jaamacadda Illinois (USA). Sababta ayaa ah in kuwii hore badiyaa aan si dhab ah loo qaadin, sidaa darteed tallaabooyinka diyaarinta ee lagama maarmaanka ah looma qaadin si loola macaamilo. Sababtaas awgeed, Xarunta Duufaanta Qaranka waxay ku nuuxnuuxsatay, iyadoo aan loo eegin magaca duufaan, waa in diirada lasaaraa halista midwalba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Ayaa go'aaminaya magaca duufaannada?
Miyaynu jileynaa ama aan sugeynaa isbedelka cimilada?